धर्म संस्कृती Archives - Page 87 of 99 - Purbeli News
भोजन हरेक ब्यक्तिलाई आवश्यक हुन्छ । खाना विना बाँच्न असम्भव छ । तर शास्त्रले जहाँ पायो त्यहिँ खाना खान नहुने भनेको छ । शास्त्रका अनुसार ७ ब्यक्तिको हातको खाना खानु धार्मिक र आर्थिक दृष्टिले घातक रहेको उल्लेख गरेको छ । १- ब्याजमा ऋण दिने ब्यक्ति : शास्त्रका अनुसार ब्याजमा ऋण दिने ब्यक्तिको घरमा खाना नखाएको राम्रो हुन्छ । गरुण पुराणले ब्याजमा ऋण द...
गौशाला / आआफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै दिदीबहिनीले आज महोत्तरीलगायत मिथिलाञ्चलभरिमा भैयादुज पर्व मनाइरहेका छन् । एकाबिहानै गाउँशहरको चौबाटामा गएर विभिन्न लोकगीत र नाचगानका साथ दिदीबहिनीले गाईको गोबर र केराउका दाना (बजरी)लाई ओखलमा कुटेर दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गरेका छन् । उनीहरुले ओखलमा गोबरसँगै कुटिएको केराउका दाना गोबरबाट झिकेर धोई पख...
हाम्रो देश नेपाल धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा धनी देश हो । त्यसैले आधुनिक नेपालका निर्माता बडामहाराज पृथ्वीनारायणले उद्घोष गरेका हुन् - नेपाल चार जात र छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो । यो प्रसङ्ग आज पनि हामी नेपालीसँग कुनै न कुनै रुपमा मेल खाएको पाइन्छ । हामी एउटै पर्वलाई परापूर्व कालदेखि नै आ-आफ्नो चलन र रङले घोलेर मनाउने गरेका छौं । प्रसङ्ग आजको भा...
भाइटीकामा ११ः५१ बजे याे दिशा फर्केर लगाउनु उत्तम
शुक्रबार, कार्तिक ०३, २०७४
काठमाडौँ / यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौंँ एवम् अन्तिम दिन आज भाइटीका पर्व दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परानुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाई मनाइँदैछ । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइबाट पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ । दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण...
लक्ष्मीलाई आकर्षित गर्न तिहारमा यी ७ ठाउँमा अबश्य बाल्नुहाेस् दियो
काठमाडौँ / हिन्दु पंचांग अनुसार कार्तिकमा तिहार मानिन्छ। यसपालि लक्ष्मी पूजा कार्तिक २ गतेको दिन परेको छ। भनिन्छ ,तिहारमा लक्ष्मी माता पृथ्वीको भ्रमण गर्नुहुन्छ र जुन मानिस पापबाट टाढा रहन्छ ,उसको घरमा माताले कृपा गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीको स्वागतको लागि सबैको घरमा पालामा बत्तीले उज्ज्यालो पारीन्छ। यहाँ जान्नुहोस लक्ष्मीलाई आकर्षित पार्न कहा-कहाँ दिओ बा...
कलियुगको आयू अब कति छ ? यस्तो छ रहस्य
एजेन्सी । धर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पर्छन् ।हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कलि युग हो । यो युगमा मानिसहरुको चरित्र बिग्रने, सभ्यताको नाममा नयाँ समस्याहरु जन्मने भनेर शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।द्वापर युगको अन्त्यपछि शुरु भएको युग नै कलि युग हो । कलि युगको अन्त्यसँगै सारा स...
धनतेरसमा क-कसले के काम गर्ने र के कुरा किन्ने ?
कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिका दिन चिकित्सा शास्त्रका देवता धन्वन्तरीको जन्मदिन हो । यस दिन नेपालको तराई क्षेत्र र भारतभरि धनतेरस पर्व मनाउने गरिन्छ । यो पर्व नेपालीले मनाउने दास्रो ठूलो पर्व तिहारको पहिलो दिन हो । यस पर्वमा भगवान् धन्वन्तरिको पूजाआजा गर्ने विधान छ । तिहारको बजारको रौनक यसै दिनबाट सुरु हुन्छ । धनतेरसका दिन लगानी गरेको...
तिहारमा कसैलाई पनि दिनै नहुने यी ७ वस्तु (भिडियाे)
काठमाडौँ / हिन्दुहरुको दोश्रो महान चाड दीपावली एक आपसमा खुशी साटासाट गरेर मनाईने चाडको रुपमा लिने गरिन्छ। तिहारले जीवनमा खुशीको बहार लिएर आउँछ। खुशी साटासाट गर्दा हामी एकअर्कामा बिभिद वस्तुहरुको उपहार आदानप्रदान गर्ने गर्दर्छौँ। तर यसरी खुशी साटासाट गर्दा दिईने उपहारले हाम्रो जीवन बर्बाद नगरोस् भन्ने कुरामा भने हामीले बिचार पुराएका हुँदैनौ। तिहा...
एजेन्सी । पछिल्लो केहि समय यता विवाह लामो समयसम्म टिकाउनु निकै मुस्किल जस्तै भइसकेको छ धेरैलाई । पति र पत्नीबीचको सम्बन्धपनि त्यति धेरै गहिरो हुँदैन । भनिन्छ जीवनसाथी यदि राम्रो छ भने जीवन स्वर्ग बन्छ । तर यहि कुरा विग्रीयो भने जीवन नर्क बन्छ । त्यसैले जो कोहिको पनि यो जान्न जरुरी छ कि हाम्रो जीवनसाथी कस्तो हुन्छ ? र उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ ? त...
हिन्दु धर्ममा रूद्राक्षलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । धार्मिक आस्थाका रूपमा रहेको रूद्राक्षले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तै, रूद्राक्षलाई आयुर्वेदिक औषधीमा समेत निकै उपयोगी हुने गर्छ । महाशिवरात्रीको दिनमा आफ्नो राशि अनुसार धारणीय रूद्राक्ष धारण गरेमा फलिफाप हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ । राशी अनुसार रूद्राक्ष प्रयोग गर...